कोरोनालाई जितेर आज पनि ९० जना घर फर्किए – हाम्रो देश
कोरोनालाई जितेर आज पनि ९० जना घर फर्किए
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनालाई जितेर थप ९० जना घर फर्किएका छन ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता प्र.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो पटक ९० जना निको भएर घर फर्किएका हुन् । यो सहित निको भएर घर फर्किनेको संख्या ६७४ पुगेको छ। त्यस्तै प्रबक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा आज थप २७९ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । यो संगै संक्रमितको संख्या ४३६४ पुगेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रबक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार देशका बिभन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा थप २७९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आज प्रादेशिक प्रयोगशाला बिराटनगरमा मोरङका ८ जना पुरुष संक्रमित भेटिएका छन्। एकजना झापाकी महिलामा पनि संक्रमण भएको छ। कोशी अस्पतालमा झापाका ४ जना पुरुष संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहीँ उदयपुरका एकजना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सप्तरीका ६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमा महिला १ रहेकी छन्। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चिवतका दुईजना संक्रमित भेटिएका छन्। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखारा नवलपुरका १ पुरुषमा संक्रमण भेटिएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सर्लाहीका २ जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको ।छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा कपिलवस्तुका, ७ जना पुरुष, नवलपरसाी ५ जना पुरुष, पाल्पाका १२ जना संक्रमित भेटिएका छन्। जसमा १ महिला र ११ पुरुष रहेका छन्। त्यही ल्याबमा प्युठानका ६ जना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल बाँकेको प्रयोगशालामा बाँकेका ३ र बर्दियाका १ जनामा संक्रमण देखिएको छ।